वि.सं.२०७८ साल वैशाख ४ गते शनिबारको राशिफल । - Saitim Khabar
४ बैशाख २०७८, शनिबार ०६:३०
प्रियजनको स्वास्थमा सामान्य खराबि आउनाले मानसीक सम’स्या आईपर्न सक्नेछ । बाणीमा मधुरता छाउनाले कुल कुटु’म्बहरुको साथ सहयोगमा बृद्यिहुने योग रहेकोछ । नयाँ लगा’निका क्षेत्रमा बिशेष सजगरहनु पर्ने समय रहेकोछ । यात्रामा सजग रहनुहोला । बादबीवादको झमेलामा फस्न सक्ने सम्भा’बना रहेको छ ।
ब्यापार ब्यव’सायको निम्ति तथा नयाँ लगानिका लागी राम्रो समय रहेको छ । मान्यजनको साथ सहयोग द्वारा ग’रीरहेको काममा बिशेष फाइदा प्राप्त हुनेछ । मनोबि’लासिताका साधनको प्रयोगमा अधिक समय ब्यतित रहनेछ । स्वास्थ सम्बन्धि समस्या ले सताउला । भौतिक श्रोत साधनको प्रयो’गले मन प्रशन्न रहला ।
मीथुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह)सामान्य आ’र्थीक अभाबको सामना गर्नु पर्ने छ । मेहेनत अनुरुपको फल प्राप्ति नहुनाले दिन निरासा पुर्ण ब्य’तित हुने छ । सामान्य यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । खानपानका कार’ण स्वास्थमा भने सामान्य समस्या देखा पर्नेछ । अरुको छीटो बिश्वास गर्ने बानिको कारण तपाँ’ईलाई सामान्य धोका हुन सक्छ ।
पुराना तथा प्रिय मि’त्रजनको भेटघाटले मन हर्शित रहनेछ । मनोरञ्जनको क्षेत्रमा धेरै समय ब्यतित हुन सक्छ । तपाईको क्षम’ताको उचित मुल्याङ्कन हुने समय रहेकोछ । प्रतिपक्क्षीह? सबल रहनाले कार्य सम्पादनमा झन्झ’ट ब्यर्होनु पर्ला । नयाँ कार्यको थाल’निले मन प्रशन्न रहला ।
परोपका’रको क्षेत्रमा धेरै समय र परीश्रम खर्च हुन सक्छ । मान्यजनको अनुसरण बाट बिशेष लाभ प्रा’प्त हुने समय रहेको छ । मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । शारिरीक आल’स्यताले सताउला । पारी’वारिक साथ सहयोग बाट काममा बिशेष फाईदा हुनेछ ।
कार्य सम्पा’दनमा भएका सामाय त्रुटिले अपजसको सामना गनु पर्ने सम्भाबना रहेको छ । अनावश्यक यात्राको सम्भा’बना रहेकोछ । प्रतिश्प’र्दीहरू कमजोर रहनाले तपाइलाइ कार्य क्षेत्र सहज बन्नेछ । दाजुभाई तथा मित्रजनको साथ सह’योगमा गरीएका कार्यमा बिशेष फाईदा पुग्नेछ ।
कार्य सम्पाद’नमा अ?को दबाबको अनुभब हुन सक्नेछ । स्वास्थमा देखा परेको गढबढीले कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झ’ट उत्पन्न गराउला । भोजभतेर जन्य कार्यमा सहभा’गीताको योग रहेकोछ । सभासम्मेलनमा सहभागीताको समय रहेकोछ । तपाईको कार्यको फल अ?लाई सहजै प्राप्त हुनाले मनमा खिन्न’ता उत्पन्न हुनेछ ।
बृश्चिक राशि (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु)ब्यापार ब्यवसा’यको क्षेत्रबाट मनग्य लाभ उठाउन सकिएला । जिबन साथीको सहयोगमा गरीएका कार्यह?मा सफलता हात ला’ग्नेछन । अध्यन अध्यापनमा लगाईएको ‘समय महत्वपूर्ण रहनेछ । शिप तथा क्षमताका आधारमा कार्यहरु सम्पादित रहनेछन । कार्य सम्पादनमा लगाईएको लगनसीलताको राम्रो कदर हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ ।
धनु रा’शि (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे)अपरीचीत ब्यक्तिहरुको बि’श्वास गर्नाले षड्यन्त्रमा फसीएला सजग रहनु पर्ने समय रहेको छ । शत्रु सबल रहनेछन । मानस’म्मानमा आचँ आउन सक्ने सम्भाबना रहेकोले बिशेष सजग रहनुहोला । आर्र्थीक झमेलाले सताउनेछ । सा’मान्य आर्थिक अभाबको सामना गर्नु पर्नेछ । यात्रा खर्च दायक रहनसक्ने सम्भाबना रहेको छ ।
मकर राशि (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि)अध्यन अध्याप’नका क्षेत्रमा समय उत्तम रहनेछ । सानो प्रयासले ब्यक्तित्व बिकासमा निकै टेवा पूर्याउनेछ । आम्दानि म’ध्यम रहनेछ । बौधिक ब्यत्तित्वह?को अनुशरण दि’र्घकालिन फाईदाका श्रोत बन्नेछन । आफु भन्दा सानोको सहयोगमा गरिएका कामहरु दीगो फाईदा मुल’क साबित हुनेछन ।
भौतिक श्रोतसा’धनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहला । कार्य सम्पादनमा भएका सामाय त्रुटिले अपज’सको सामना गनु पर्ने सम्भाबना रहेको छ । मान्यजनह?को साथस’हयोगमा जटिल कार्यह? सम्पादित रहनेछन । अरुको दबाबको अनुभब हुन सक्नेछ । सामाजिक कार्यका क्षेत्रमा धेरै समय र परी’श्रम खर्चिनु पर्नेछ ।
मान सम्मा’न प्राप्तिको योग रहेको छ । प्रिय मित्रजन सगँको भेटघाटले मन प्रशन्न रहला । अध्यन अध्या’पन मध्यम रहनेछ । मनमा चन्चलताले बास गर्नाले सहि निर्णय गर्न नसकीएला । कार्य सम्पादनमा लगाईएको लगन’सीलताको राम्रो कदर हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । बल पराक्रममा बृद्धि हुनेछ ।